Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Dhalinta Hiil-qaran Ee Jigjiga oo Soo Gabagaboobay.
Shirkii Dhalinta Hiil-qaran Ee Jigjiga oo Soo Gabagaboobay.
Posted by Dulmane	/ February 2, 2019
Waxaa magaalada Jigjiga ee xarunta Gobolka Faafan ka qabsoomay Shir aad ubalaadhan oo ay Soo abaabuleen dhalinta Too katirsan Unugta JWXO ee Gobolka Faafan.
Shirkan oo ahaa mid aad ubalaadhan waxaa kasoo qayb galay madax katirsan Gudiga fulinta ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO, kuwaas oo khudbado dhaadheer oo dhaxal gal ah Madasha kasoo jeediyay.
Hogaamada kasoo qaybgalay shirka oo kala ahaa Hogaanka Warfaafinta JWXO, Hogaanka Qorshaynta & Cilmi Baadhista, Hogaanka Arimaha Ururka iyo Hogaan kuxigeenka Dhaqaalaha, kuwaas oo dhamaantood Soo jeediyay khudbado mug iyo miisaan leh.
Gudoomiyaha Unugta Faafan iyo gudigiisa ayaa kamid ahaa dadkii sida wayn uga hadlay shirka, dhalintana kuguubaabiyay in ay howlaha halgan ee uyaala sare uqaadaan.
Sidoo kale waxaa Madasha uu shirku kasocday dareenkooda suugaan kucabiray Abwaaniinta ree Ogadenia ee kala ah Abwaan Bashiir Cabdi Yuusuf iyo Abwaan Cabdinaasir.
Dhalinta kulanka kasoo qayb galay oo wajiyadooda ay kamuuqatay farxad aad ubadan ayaa dhankooda su’aalo aad ubadan waydiiyay mas’uuliyiinta waxaana dhamaan su’aalihii si Dagan uga jawaabay madaxdii JWXO ee kulanka sooxaadiray.
Warbaahinta Jabhada sida Ilays TV, ONA iyo Qorahay Media ayaa kamid ahaa warbaahintii xaflada lagu Marti qaaday ee sida wayn Wararka uga sootabinayay.